Chiral ogige-APICMO CDMO Nsukka
ngwaahịa > Chiral ogige
Nchịkọta ọnụ bụ ihe onwunwe geometric nke ụfọdụ mkpụrụ ndụ na ions. Ngwurugwu nke chi / ion abụghị ihe na-enweghị ihe ọhụụ na onyinyo ya. Ọnụnọ nke carbon center center bụ otu n'ime ọtụtụ atụmatụ nke na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ụmụ mmadụ ghara ịdị na-eme ka ọ dị ndụ.
A na-ahọrọ onye ọ bụla na-enantiomers dị ka aka nri ma ọ bụ aka ekpe. Nchịkọta ọnụ bụ mkparịta ụka dị mkpa mgbe ị na-ekwurịta banyere stereochemistry na ngụkọta nke na-emepụta ọgwụ na nke na-edozi ahụ. Echiche a dị ezigbo mkpa n'ihi na ọtụtụ mkpụrụ ndụ ihe ọṅụṅụ na ọgwụ na-agwọ chiral.
Ọtụtụ ụmụ irighiri ihe ndị na-arụ ọrụ na mmiri bụ chiral, gụnyere amino acid nke na-emekarị (ogidi ndị na-edozi protein) na shuga. Na usoro ndu, ọtụtụ n'ime ogige ndị a bụ otu ụdị ndụ: ọtụtụ amino acid bụ levorotatory (l) na sugars bụ dextrorotatory (d). A na-eme ka ndị na-edozi ahụ na-emepụta nke amino acids ma bụrụ ndị a maara dị ka ndị na-edozi aka ekpe; ihe dika ndi amino acids na-eme ka ha nweta protein.
Igosi ihe niile 4 pụta